Ilhaan Cumar oo u hiillisay dadka madowga ah kaddib dilkii naxdinta lahaa ee George Floyd (Booliiska oo ay canaanatay) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Ilhaan Cumar oo u hiillisay dadka madowga ah kaddib dilkii naxdinta lahaa...
(Washington, DC) 27 Maajo 2020 – Xil. Ilhaan Cumar (D-Minn.) ayaa aad u cambaaraysay hay’aadka sharci oogista sida Booliiska oo awood xad-dhaaf ah u adeegsanaya dad ka dhiidhinaya dilkii George Floyd oo shalay u dhintay askari caddaan ah oo qoorta kaga fariistay, tiiyoo uu katiinadaysnaa isagoo ku cataabaya ”fadlan ma neefsan karo.”
“In rasaas caag ah iyo gaaska ilmada loo adeegsado dibed baxayaal aan hubaysnayn jeer ay weliba carruuri goobta joogto, marna looma dulqaadan karo.’ ayay Ilhaan kusoo qortay Twitter-ka.
“Waxa caawa magaaladeenna ka dhacay waa ceeb. Booliisku waxay u baahan yihiin inay is xakameeyaan, umadeennuna waxay u baahan tahay waqti ay ku raystaan.” ayay raacisay.
Muuqaalka geerida jilib-ceejiska ah ee Floyd ayaa caalamka qabsatay maanta, iyadoo maxalli ahaan kicisay dadka laga tirada badan yahay, gaar ahaan madowga.
Afar ka mid ah askarta Minneapolis oo ku lug lahaa geerida Floyd ayaa xilkii laga tiriyey ciidankana laga cayriyey iyagoo lagu soo oogayo dacwo dil la xiriirta, sida uu ku dhawaaqay Duqa magaalada Minneapolis, Jacob Frey (D) oo warka soo tweeted gareeyey markiiba.
Previous articleSAWIRRO: Somaliland oo lagu wareejiyey gaadiid MUG u yeelaya awooddeeda la dagaallanka….
Next articleWakaaladda Wararka ANSA oo raalli gelin buuxda siisay Silvia Romano (Maxa ka bi’isay?)